Hetsika ataon'ny Fikambanana fampiroboroboana ara-toekarena Hangzhou Fenghua —— Ho Teknolojia HEO
Ny tolakandron'ny 15 Aogositra, ny Hangzhou Fenghua Economic Promotion Association dia nanao hetsika ho an'ny orinasa iray - niditra tao amin'ny sampana sekretera jeneraly lefitra "HEO teknolojia" hahatsapa ny firoboroboan'ny seho mipoitra eo amin'ny sehatry ny haitao biomedika. Hangzhou ...
Novel Coronavirus mipoitra eran'izao tontolo izao
raha ny fahitana ny virus miovaova Covid 19 tany Angletera tamin'ny faran'ny taona lasa, firenena sy faritra maro no nitatitra fa voan'ny virus mutated hita any UK, ary misy firenena koa mahita kinova hafa momba ny virus mutated. Tamin'ny 2021, izao tontolo izao wi ...
Lehilahy iray 96 taona monina amin'ny trano fitaizana be antitra any Espana no lasa olona voalohany nahazo vaksinina hiadiana amin'ny virus coronavirus vaovao. Rehefa avy nahazo ny tsindrona ilay lahiantitra dia nilaza fa tsy mahazo aina izy. Monica Tapias, mpiahy avy amin'ilay trano fitaizana be antitra ihany izay nanao vaksiny ...
Mba hampanan-karena ny fiainam-pialan-tsasatry ny mpiasa, hanamaivanana ny tsindry miasa, ary hanomezana fotoana azy ireo hiala sasatra tanteraka aorian'ny asa, Hangzhou Hengao Technology Co., Ltd. dia nikarakara hetsika fananganana ekipa ny 30 Desambra 2020, ary mpiasa 57 an'ny ny orinasa dia nandray anjara tamin'ity hetsika ity. Aft ...
Prospect ny indostria IVD
Tao anatin'ny taona vitsivitsy, nitombo haingana ny indostrian'ny diagnostika in vitro (IVD). Raha ny angon-drakitra navoakan'ny Evaluate MedTech, nanomboka ny taona 2014 ka hatramin'ny 2017, ny haben'ny varotra manerantany an'ny indostria IVD dia nitombo isan-taona, hatramin'ny $ 49 miliara 900 tapitrisa tamin'ny 2014 ka hatramin'ny $ 52 ...
Inona no mahasamihafa ny virus corona vaovao sy ny gripa?
Amin'izao fotoana izao, ny tranga areti-mifindra vaovao eran'izao dia mifandimby. Ny fararano sy ny ririnina dia vanim-potoana miseho amin'ny aretin'ny taovam-pisefoana. Ny mari-pana ambany dia manampy amin'ny fahavelomana sy fiparitahan'ny virus corona vaovao sy virus gripa gripa. Misy atahorana ny n ...
Paikady hahitana aretina azo
Matetika misy paikady roa hamantarana ireo aretina mifindra: ny fitiliana ny pathogen mihitsy na ny fitiliana ireo antibodies novokarin'ny vatan'olombelona mba hanoherana ny pathogen. Ny fitiliana ny valanaretina pathogens dia afaka mamantatra antigène (mazàna ny proteinina amin'ny pathogens, ny sasany mampiasa ...